မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Weekend trip to Malacca, Malaysia
Posted by mabaydar at 9:56 AM
ခရီးသွား post တွေအကုန်ကြိုက်တယ် ဆစ်ဒနီခရီးစဉ်လည်းအရမ်းအသုံးဝင်တယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis layy ရေ။
အမြဲဖတ်ပြီး... comment ပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... Comment တွေပက နောက်ဆက်ရေးဖို့ အားဆေးလေးတွေပါပဲ...
4/11/2014 10:42 AM
Maybe one day I wil get to go there.
4/11/2014 12:19 PM
သွားတုန်းက ဟေတန် မှာတည်းတာ ဟိုတယ်ကဆောက်ပြီးတာမကြာသေးဘူးထင်တယ်
ရေချိုးခန်းလဲကျယ်တယ် bathtub တော့မပါဘူး
ညိုညာစားသောက်ဆိုင်က ဟေတန်မျက်စောင်းထိုး ၅/၁၀ မိနစ်လောက်လျှောက်ရင်ရောက်တဲ့ MAKKO ဆိုတဲ့ဆိုင်ကောင်းတယ်
4/11/2014 2:12 PM
တို့သွားတုန်းက ပန်းတွေအများကြီးဆင်ထားပြီး သီချင်းအကျယ်ကြီးဖွင့်တဲ့
ဆိုက်ကား စီးခဲ့သေးတယ်... ရယ်စရာကြီး... :D
အမှန်က နေတဲ့ Equatorial hotel နဲ့ နာမည်ကြီးနေရာတွေနဲ့က နီးနီးလေးရယ်...
မသွားခင် အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေမထားတော့... ဟိုရောက်တော့မှ ဘယ်သွားရမှန်းမသိလို့ အဲ့ဒီရယ်စရာဆိုက်ကားကြီး ငှားစီးတာ.. :D :D
ပွညျ့စုံလှနျးလို့ ကိုယျတိုငျရောကျနရေသလိုပဲ။ သှားဖို့ရညျရှယျနတော နောကျမှ တခေါကျလာဖတျအုံးမယျ။ ဘိုငျသဝေး ဗိုကျဆာနလေို့ အစာတှမွေငျတော့ ဂလုသှားတယျ။
4/11/2014 7:46 PM
Yes... you should go forashort trip...
ဟေတန်က ခုထက်ထိလဲ သစ်နေတုန်းပါပဲ... မာကိုတာက bathtub ပါပေမဲ့ သိပ်မသန်လို့ မသုံးဖြစ်ြပါဘူး... နောက်တစ်ခါ ထပ်သွားမှ Nyonya စားသောက်ဆိုင် ထပ် try မယ်...
ဟား ဟား... မဗေဒါလဲ အချိန်ရရင်တော့ စီးခဲ့ချင်ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ အဲဒိ ဆိုက်ကားလမ်းကြောင်းကလဲ အဲ့နားတစ်ဝိုက်ပဲထင်တယ်... ဈေးဘယ်လောက်လဲတော့ မသိဘူး... တန်မှ တန်ပါ့မလားလို့.... လူကြီးတွေနဲ့ သွားရင်တော့ စီးရမယ်... သူတို့က လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူး...
4/11/2014 8:49 PM
window ကို unicode font ပြောင်းပြီး ကြည့်တာတောင် ဖောင့်အမှန် မမြင်ရဘူး... ဒါပေမဲ့ ဘာရေးထားလဲတော့ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်.... အင်း weekend trip သွားဖို့လောက်တော့ အဆင်ပြေတယ်... အဲဒိမှာ အဲဒိ နေရာလေးနဲ့ ပြတိုက်တွေကလွဲလို့ ဘာမှတော့ ကြည့်စရာမရှိဘူး... ဒါပေမဲ့ မုန့်စားဖို့တော့ တော်တော်များတယ်... :D
4/11/2014 8:51 PM
ရယ်စရာဆိုက်ကားလေး ကြည့်ချင်တာ။၂ ရက်တည်းပေလို့နော်။ အစုံအစုံပဲ။ တော်တော်လည်း ဈေးတန်တယ်နော်။ Jonker Night street market သွားပြီး အစားတွေ လိုက်စားကြည့်ချင်တယ်။
4/12/2014 7:53 PM
ဒီတခါခရီးသွားပို့စ်က ပိုပြီးအသေးစိပ်သလိုပဲ ဗဟုသုတရပါတယ်မဗေဒါရေ ဝိုင်းလဲ asia ကို vocation သွားချင်လိုက်တာ အဓိကက အစားအသောက်ကောင်းတွေစားချင်လို့
4/13/2014 6:20 PM
မလကာကိုသွားချင်ပေမယ့် ကြောက်လို့မသွားရဲဘူး မဗေဒါတို့သွားတာတွေ့တော့မှပဲ secure ဖြစ်မှန်းသိတော့တယ် မကျေပွဲထပ်နွှဲမယ်ဆိုရင်ခေါ်နော်...လိုက်ချင်လို့.. :P
အင်း ဆိုက်ကားလေး video တော့ ရိုက်လာဖြစ်တယ်ထင်တယ်... နောက်တော့ တင် ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်... jonker street night market က အစားအစာတွေကေညက်းမှကောင်း.. ဈေးလဲပေါတယ်... must try...
ပုံတွေကြည့်ပြီး gopro တောင်လိုချင်သွားတယ်!! Melacca river cruise မစီးခဲ့ဘူးလား? အရင်တစ်ခေါက် မလက္ကားသွားတုန်းက လည်စရာ၊ ဝင်ကြေးနဲ့ ဖွင့်တဲ့အချိန်တွေ map ပေါ်မှာ စုထားသေးတယ်။ နောက်ခေါက်သွားရင် အသုံးတည့်ရင်တည့်အောင် :)
4/23/2014 4:43 PM
အချိန်သိပ်မရှိတာနဲ့မစီးဖြစ်ခဲ့ဘူး... နောက်တစ်ခေါက်သွားမှပဲ စီးတော့မယ်... gopro ဝယ်သာဝယ် အားပေူတယ်....
4/25/2014 10:23 AM
အရမ်း secure ဖြစ်ပါတယ်... KL တို့ JB တို့နဲ့ ယှဉ်ရင်ပေါ့...ကိုယ်ကတော့ common sense နဲ့ သတိတော့ ရှိသင့်တာပေါ့...
အစားအသောက်ကောင်းတွေစားချင်ရင်တော့ Thai က Bangkok တို့ Phuket တို့ကို recommend မယ်... ဒီတစ်ခေါက်ပိုစ့်က တိုနေမှာစိုးတာရော Malacca က ရှေး သမိုင်းဝင်မြို့ဆိုတော့ သမသမိုင်းကြောင်းလးပါ ထည့် ရေးပေးတာ...
4/25/2014 1:42 PM